Home Wararka Dayuuradaha “Drones” oo loo keensaday in lagu dilo ciidamada diidan Farmaajo.
Dayuuradaha “Drones” oo loo keensaday in lagu dilo ciidamada diidan Farmaajo.
Drones waa dayuuradaha aan duuliyaha lahayn oo lagu sameeyo waxyaabo badan sida in wax lagu dilo ama lagu basaaso inta kamerooyin lagu xero.
Qorshayaasha Febraayo 2022 kadib dalka lagu dhaqi doono waa kuwa la eedi doono oo aad u xanuun badan maanatasa aan dad badni wax dareen ah ka muujneyn oo cid walib waa wanka weyn indhiisu cirka ma arkaan ilaa la gowraco.
Waxaa la bilaabay in la soo iibsado dayuuradaha aan cidi wadin’droans” oo loogu talagalay ina lagu laayo dad badan oo ka soo horjeea qaabka uu ay dowladdaan wax u waddo. Dayuuradahaasa waxaa soo iibiyey oo ka qaatay wixiisa Xildhibaan Zakariya Xaji Maxamuud oo waddaniyad been ah isla ooysiin jiray balsa hadda jeebabka buuxsaday. Waxaanu hadda la bilaabay marin habaabin iyo is nabid uu u ceeb qarinayo dowladda kadib markii si khaldan loo shaaciyey dayuuradahaas. Dayuuradahaas waa kuwa uu Mareykanku u isticmaalo Dacisha iyo Al shabaab, waxaana khater haddii ay gacanta u galaan dad aan masuul ahayn oo sida ay hadda xabadda u isticmaalaan u isticmaali doono. Waxaa uu Zakariye sheegay inay Nabadsugiida kala wareegtay xataa haddey run tahay sidee:
Ayuu shakhsi uu u soo gadan karaa droan joogta w$2m xabaddii waa qiimaha ugu jaban sida ay qortay Jariidad ka soo baxda Dalkaas Ingiriiska ee lagu magacaabo “ The Guardian”. Lixda dayuuradood waxay ku kacayaan $12m. Qof caadi ah oo aan jaajuus ahayn ma heli karaa lacagtaas? Dowlad ama shakhsi aan dano gaar ah laga lahayn sida Faramajo ma la siinayaa dayuuradahaas? Xisaabta akhriste waa xagaaga.
Haddiiba ay run tahay NISA oo six un oo laga naxo u dishay gabar yaroo sarkaalad nafteeda dalka u hurtay ahayd ma lagu aamini karaa dayuuradahaas?
Xog laga helaya Vila Somaliya waxay leedahay waxaa mashruucaan waxa qeyb weyn ka ah Dalka Erateriya oo Zakairiya weligiiba uu ahaa jaajuus, kuwaas oo ka naxsan waxa ku dhacay Abiy Axmed kana welwelsan wiilkooda Farmajo inuu jidkaas iyo meel ka sii xun uu maro. Sidoo kale dayuuradahaan waxaa loogu talagalay in marka ugu horreysa lagu laayo hogaamiyayaasha ciidankii Badbaado qaran oo laga baqayo inay mar kale soo laabtaan, waxaana dhawaan markey hawlgalaan dayuuradaha maqli doontaa hebel waa ladilay iwm.
Waxan horay u ogeyn in Guriceel lagu tijaabinayo siyaasadda dalka lagu dhaqi doono marka la gaaro Febraayo 2022 taas oo ah in cid kasta oo heshiis lala galay, Ahlusunna iyo Axmed Madoobe kii ay ahaataba looga baxo, laba farna loo taago:
Inay isa soo dhiibaan sida Sheekh Shaakir iyo Macallin Maxamuud oo tijaabada ugu horreysa maraya sidadka loogu sheego in ummadda laga qabanayo oo xabsiyo loo dhigo.
Ama in la dilo haddii ay diidaan inay isa soo dhiibaan, waxana xantu sheegeysaa inuu ugu horreyn doono Axmed Madoobe ragga lala gali hawshaas qar iska tuurka ah.
Isweydii waddada u hartay Macallin Maxamuud iyo Sheekh oo ka hayn inay isa soo dhiibaan ama ay hubkooda la galaan shabaab iyo Daacish, taas oo keeni doonta xaalad intaan ka sii xun ama ay abuurmaan mar kale kooxo iska soo wada horjeeda oo col wada ah kuna dagaala magaala kasta.
Habdhaqankaan Isa soo dhiib ama Dhimo waxay noqon doontaa sharciga lagu dhaqi doono dalka marka la gaaro Febraayo 2022, waxayna ku bilaaban doontaa Madaxda dowlad Goboleedyada iyo Mucaaridka kuwooda diida inay isa soo dhiibaan.
Horaba waxaa mar kale la bilaabay in ciidan loo daabulo Gedo oo beryahan deganeyd si halkaas ay iyana rabshado kale uga bilowdaan. Waxaa isagana qaabkii dab loogu qaban lahaa lagu hawl jiraa Balatweyne oo uu habeen dhoweyd la shiray RW Rooble beelaha dega Hiiraan balse Xawaadlaha laga reebay, waxayna u egtahay in la rabo in beelahaas la hubeeyo, waana khater jidka ku soo jirta.
Ugu dambeyn xaaladda dalka halkaas ayey ku socotaa waxaana muuqata inaysan jirin cid doorasho ay dani ugu jirtaa xelligaan waayo:
Farmajo ma rabo doorasho uusan Boobi Karin.
Rooble ma rabo Doorasho uu ku waaynayo kursiga uu hadda ku fadhiyo oo ah RW dalka.
Beesha Caalamka ma rabto doorasho waayo ma hubto inuu ku soo bixi karo qof sida Farmajo ugu shaqeynayo iyagoon weydiisan, dalkana ugu hayn kara khater dul hoganeyso si ay ugu helaa dhaqaale badan. Waayo ruuxii laba sano ka shaqeystaa Somaliya waxaa uu ka urursanayaa wixii uu shaqada kaga fadhiisan lahaa.
Mucaaridka oo iyaga kala shakisan qabana intii uu hebel noqon lahaa madaxdweyne Faramajo ha joogo.
Cidda kaliya ee doorasho rabtaa waa shacbiga, iyagana weli uma bislaan inay sidii Tunisiya, Masar, Libiya ay dariiqyada qaadaan iskana tuuraan dhammaan kooxaha siyaabo kala duwan ugu heshiisay dhiig baxan in dalka lagu sii hayo oo dhaqaalihii dhintay, caafimaadkii dhintay, noloshii dhimatay.